Raha tsy manova ny lalàna mifehy ny angovo azo havaozina i Espana dia tsy hanaraka ny fifanarahana Paris | Fanavaozana maintso
Daniel Palomino | | Angovo azo havaozina, About us
Araka ny tatitra "Modely angovo maharitra ho an'i Espana amin'ny 2050" , inona no hitanao amin'ny fipihana eto, natolotr'i Alberto Amores (mpiara-miasa amin'ny orinasa consultant Deloitte) ao amin'ny AEE (Electric Power Authority) Tsy afaka mifanaraka amin'ny fifanarahana tany Paris intsony i Espaina amin'ny 2050 raha tsy manova ny lalàna mifehy ianao ankehitriny momba ny havaozina sy ny toe-tsena ankehitriny.
Ka i Espana mahafeno ny tanjona fanamarihana ny mampihena ny entona tamin'ny 2050 tany ho any 80% sy 90%, ity consultancy ity, Deloitte, dia manondro fa ny fampiasam-bola ilaina mba hahatratrarana izany dia mihodinkodina izy ireo 330.000 385.000 sy XNUMX tapitrisa euro, izay ifandraisan'ny vondrona lehibe amin'ity vola ity amin'ny fametrahana vaovao azo havaozina, dia manodidina ny 185.000 sy 251.000 tapitrisa Euros izany.
Amin'izany, nanamarika i Alberto Amores; "Ny ezaky ny decarbonisation lehibe dia amin'ny fampiasana angovo, izay mitaky fanovana eo amin'ny toekarena sy amin'ny fomba fanjifantsika angovo."
Mba hahatratrarana ny tanjona ilaina koa ny mihetsika ao amin'ny fanoloana ny vatan'ny angovo rehetra satria ny 38% -n'ny entona any Espana ihany no avy amin'ny fitaterana, ankoatr'izay Ampitomboina araka izay araka izay azo atao ny fahombiazan'ny angovo.
Izany dia vokatry ny tsy mihoatra na latsaky ny even mahatratra 100% ny faravodilanitra amin'ny havaozina na dia ny ampahatelon'ny lalan'ny Fifanarahana Paris aza dia voasaronaIo koa dia manisa fa ny teknolojia sasany dia ho tavela amin'ny "shaker" angovo toy ny amin'ny vokatra solika na arina, hoy ny fizarana vaovao an'ny orinasa Monitor Deloitte ao amin'ny tatitra voalaza etsy ambony.
Noho io antony io ihany, amin'ny 2050 ny herinaratra no tokony ho ny angovo mampahery indrindra amin'ny sehatra rehetra azo atao izany, toy ny sehatry ny toeram-ponenana, ny sehatry ny serivisy, ny an'ny fiara fitaterana mavesatra na ny an'ny fiaramanidina, hoy ny tatitra.
Raha mankany isika angovo azo havaozina any Espana Ny fahaizana apetraka eo anelanelan'ny 2030 sy 80 GW dia takiana amin'ny 89 ho toy ny teboka mpanelanelana hahatratrarana ny tanjona amin'ny 2050 izay eo anelanelan'ny 161 sy 216GW, izay maneho mihoatra ny 280% ankehitriny.
Ho tratra ve izany?
Raha izany, ary raha vantany vao vita ny famatsiam-bola ilaina amin'ny sehatra rehetra, amin'ny fiheverana ny fitomboan'ny fangatahana ho singa voalohany, ny salan'isan'ny vidin'ny herinaratra any Espana dia ahena ho antsasaky ny antsasany mijanona eo anelanelan'ny € 65 sy € 75 / MWh fa tsy € 119 / MWh.
Etsy ankilany, Deloitte dia manome tolo-kevitra sasantsasany, izay manasongadina ireto manaraka ireto:
Famaritana ny tanjona sy ny politika ara-bola
Mamaritra tanjona kendrena ho an'ny sehatra rehetra.
Mamolavola mari-pamantarana mahomby amin'ny vidin'ny fandefasana.
Mampiroborobo ny fiara mandeha amin'ny herinaratra na hybrid ary ny isa famerenana ny bateria.
Amporisiho ihany koa ny fiovan'ny fiara ho an'ny lalamby fitaterana mavesatra.
Mampiroborobo ny NGV (Fiara Entona Gas voajanahary) amin'ny fifindrana amin'ny fitaterana an-dalambe.
Fampivoarana ny fitaterana an-dranomasina maharitra miaraka amin'ny NGV tsirairay avy sy ny seranan-tsambo maintso.
Sehatra fonenana, serivisy ary indostria
Mampiroborobo ny fihenan'ny fandefasana entam-barotra avy amin'ny sehatry ny toeram-ponenana ary koa ny fihenan'ny hetra avy amin'ny sehatry ny serivisy.
Mampiroborobo ny fahombiazan'ny angovo amin'ny indostria ary manova ny vector vector.
Mametraha rafitra amin'ny fametrahana ny fahaiza-manao ilaina (azo havaozina sy nomaniny ho solon'izay) mba hanararaotana ny fahafaha-manaon'ny backup efa napetraka.
Manitatra ny fahazoan-dàlana hiasa amin'ireo toby nokleary hatramin'ny 60 taona.
Amporisiho ny fampiasam-bola ilaina amin'ny tambajotra.
Avadiho ho lasa famantarana ny vidiny mahomby ny tahan'ny herinaratra.
Espanao mazava ho azy dia efa manana ny toerana hanombohana hahatratra ny tanjona napetraky ny Fifanarahana Paris, na farafaharatsiny mba hanandramana Mihevitra ve ianao fa tena hahazo izany izy? na ny fanontaniana azo antenaina indrindra Mihevitra ve ianao fa hanandrana i Espana?
Ankoatry ny 33 taona an-tsakany sy andavany hahatratra ny tanjona, dia manana tolo-kevitra mety ihany koa izyNy hany sisa tavela hatao dia ny fanovana ny lalàna mifehy ny havaozina mba hanamorana ny lalany.
Amin'izao fotoana izao dia hitako fa sarotra raha tsy miova koa ny toe-tsaina, ho an'ny zavatra maro dia tsara i Espana fa firenena vetoes ny fidiran'ny vokatra avy amin'ny marika toa an'i Tesla satria manana batterie ho an'ny fiara elektrika manana autonomie 500 km tsy izy. toa matihanina be amiko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Raha tsy manova ny lalàna mifehy ny angovo azo havaozina i Espana dia tsy hanaraka ny fifanarahana tany Paris izy io